Audacity: Dzakanakisa Dzimwe nzira dzaungashandisa | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura maaramu akabatidzwa nedzimwe nhau dzakabuda nezve kuvanzika mukati Audacity ikozvino zvachinja maoko. Iwe unozogona kuona mambure azere nezvinyorwa mukufarira iyi yakavhurwa sosi software uye zvakare kupokana neavo vasina kufarira shanduko zvachose.
Zvakanaka, kunyangwe iwe usingade Audacity kune izvo zvikonzero, kana kana uchida imwe alternativa kune vamwe vakasiyana, heino runyorwa pamwe nesarudzo dzesarudzo dzaunadzo paminwe yako yekugadzirisa kurira muLinux ...
1 Dzimwe nzira dzakanakisa dze Audacity
1.7 GTK Yakapa Yakachena
Dzimwe nzira dzakanakisa dze Audacity
Ardor inozivikanwa audio software iyo inoshandiswa zvakanyanya muLinux distros neavo vanoda kuita mabasa avo nezwi. Iyo ndeimwe yeakanakisa dzimwe nzira kune Audacity, pamwe nekuve wakasununguka. Iwe unogona kunyora, kucheka, kuenzanisa, uye zvimwe zvakawanda nematurusi ayo ekugadzirisa maturu.
Imwe nzira ye Audacity. A mumhanzi mupepeti ine graphical interface yekushanda nayo ichave iri nyore chaizvo. Inofananidzwa neyakajairwa sequencer maficha, iyi inokurumidza uye inoratidza mamwe marodhi edhiyo pachiratidziri.
Frinika zvakare vakasununguka uye vakasununguka, pasi pegwaro reGPL. Iyo yakakwana mimhanzi yekushandira. Inosanganisira sequencer, MIDI rutsigiro, software synthesizer, odhiyo rekodhi, piyano, yekugadzirisa system, uye nezvimwe.
EKO iri yakapusa ruzha mupepeti. Zvakare, inotsigira mazhinji emhando dzakakurumbira mafomati. Inogona kutema, kuteedzera, kunama ruzha uye ine mashoma, asi anoshanda FX processor.
inzwi iri rakatemwa odhiyo loopback. Chishandiso chinokutendera kuti utore zvinyorwa zvekurekodha nekutora zvakaburitswa kubva kune chimwe chirongwa, senge multimedia player. Unogona kusevha muWAV fomati kana chiteshi kune chimwe chirongwa senge MP3 encoder.
Kwave iri mupepeti rakagadzirwa ne KDE, kunyangwe ichigona kuiswa munzvimbo dzisiri-Plasma. Iyo inobvumira kurekodha kurira, kutamba, kupinza uye kugadzirisa mune akasiyana mafomati.
GTK Yakapa Yakachena
Iyi ndiyo imwe nzira yeku Audacity, asi yakagadzirirwa GNOME (asi inogona kuiswa mune dzimwe nharaunda). Zviri mutsindo wezwi yakapusa iyo inoshandisa GTK + kune ayo GUI majeti.
Iyo imwe software yakagadzirirwa multitrack odhiyo kugadzirisa. Kunyangwe iri yechinyakare, inoshanda uye inogona kubatsira pamabasa akareruka sekutamba, kurekodha, kushandura pakati pemafomati, kuwedzera mhedzisiro, kusanganisa, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Audacity: Idzo Dzakanakisa Dzimwe nzira dzaunogona kushandisa
Nei kudzidza chirongwa kuchiponesa yemahara software (Opinion)